Pharm & cosmetic Additives vanotengesa uye fekitori - China Pharm & cosmetic Additives Vagadziri
Glycine CAS 56-40-6 yeParma Giredhi (USP / EP / BP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: Glycine
Chitarisiko: White crystalline powder
Zvigadzirwa zveChigadzirwa: Inonaka inotapira, inosungunuka zviri nyore mumvura, inogadzikana zvishoma mu methanol uye ethanol, isina insoluble muacetone uye ether, nzvimbo inonyunguduka: pakati pe232-236 ℃ (kuora).
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yePharma Giredhi (USP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Lysine HCL
Zvigadzirwa zveChigadzirwa: Isina kristaro isina chinhu, isina hwema, inotapira inovava; yakanyungudika mumvura, yakanyungudika zvishoma mu ethanol uye diethyl ether
L-valine CAS 72-18-4 yeFarm Giredhi (USP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Valine
CAS HERE: 72-18-4
Product Properties: Odorless, Tasting inotapira asi inovava mushure, Soluble in water and hardly soluble in ethyl alcohol
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 yePharma Giredhi (USP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Phenylalanine
Chitarisiko: chena kune-chena yakanaka crystalline upfu
Chigadzirwa Zvivakwa: Zvishoma peinhu hwema uye kuvava. Yakagadzikana pasi pekupisa, mwenje nemhepo
L-Methionine CAS 63-68-3 yeParma Giredhi (USP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Methionine
Chitarisiko: White Makristasi kana Crystalline Powder
Chigadzirwa Zvivakwa: Zvishoma zvakasarudzika hwema, zvishoma zvinovava mukuravira. Utsotso nzvimbo: 280 ~ 281 ℃. Kusagadzikana kune yakasimba acids. Soluble mumvura, inodziya sanganisa ethanol, alkaline mhinduro, kana sanganisa mineral acids. Insoluble mu ethanol, ingangoita insoluble mu ether
L-Leucine CAS 61-90-5 yeParma Giredhi (USP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: L-Leucine
CAS HERE: 61-90-5
Zvigadzirwa zveChigadzirwa: Ravidzai zvinovava zvishoma, zvakasungunuka mumvura, Zvishoma zvinosungunuka mune doro, zvisingasviki mune ether.
DL-Methionine CAS 59-51-8 yeParma Giredhi (USP / EP)
73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, Kudya Kwemhuka, L-Threonine Pharm Giredhi, Pharm Giredhi L-Leucine, L-Threonine Chikafu cheGiredhi,